Madaxweyne Xasan Sheekh oo iftiimiyay halka rasmiga ah ay ka wasaqeysan tahay colaada Gaalkacyo (VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo iftiimiyay halka rasmiga ah ay ka wasaqeysan tahay colaada Gaalkacyo (VIDEO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u beeniyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lug leedahay dagaalada ka soconaaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo wareeysi gaar ah xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku siiyay teleefishinka UNIVESAL-TV ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aanay wax lug ah ku laheyn colaada iyo dagaalada xilligaan ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay hore baaqyo u kala dirtay dhinayacyadda ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo, islamarkaana aanay weli muuqan in baaqyadaasi la dhaqan geliyay.
“Xilligaan la joogo ma jirto meel ay dowladda federaalka Soomaliya colaad ka hurineeyso, dowladda wax door ah kuma lahan dagaalada Gaalkacyo, ma jirto cid ay dowladda qalbi ama addin ahaan kala jirto dagaaladaas, waxaan dhowr jeer oo hore ka codsannay maamulada Galmudug iyo Puntland inay joojiyaan dagaalada, islamarkaana dhaqan geliyaan heshiiskii December 2015-kii oo ay beesha caalamka goob-joog ka aheyd” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in colaada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ay soo jireen ahayd muddo qarni ka badan, islamarkaana aanay aheyn dagaal maanta ama shalay soo bilawday, isagoo soo hadal qaaday heshiisyadii ay horay u gaareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/laahi Yuusuf Axmed iyo Jeneraal Maxamed Faarax Xasan Ceydiid ee lagu dhameynayay colaada xilligaasi ka taagneyd magaalada Gaalkacyo.
“Waxaan rabbaa inaa dadka Soomaaliyeed u sheego in colaada Gaalkacyo iyo Mudug aanay ahayn mid maanta iyo shalay soo bilaabatay, waxay soo jirtay muddo qarni ka badan, ma ahan mid ay bilaabeen dowladda Galmudug iyo Puntland, Jeneraal Ceydiid iyo Korneel C/laahi Yuusuf ayaa heshiis lagu dhameynayo colaada xilligaasi ka taagneyd Gaalkacyo ka gaaray, waana waajib in colaadaasi heshiis laga gaaro” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Si kastaba oo ay ahaataba, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli dhowr jeer hore dowladda dhexe lagu eedeeyay inay hurineeyso colaada iyo dagaalada ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug islarmarkaana ay garab siinayso ciidanka maamulka Galmudug ee dagaalka kala dhaxeeyo kuwa Puntland.